Posted by blackroze at Sunday, November 06, 2011
AH on6November 2011 at 18:39 said...
အစ်မရေ... ဘလော့လေးမှာ တွေးစရာတွေ အများကြီးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာ။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ကို မိဘတွေက အများကြီးတွေးတတ်ကြပါတယ်။ ငါ့ သားသမီဟာ ဟိုနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်တော့ ဟိုလို အခွင့်အရေး ပိုရမယ်၊ ဒီနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်တော့ ဒီလို အခွင့်အရေးပိုရမယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသိသင့်တာက ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ အခွင့်အရေး ဟာ ဒုတိယမြောက် လူတန်းစား၊ ဒါမှ မဟုတ် တတိယမြောက် လူတန်းစာ တစ်ရပ်အနေနဲ့သာ ရမယ့် အခွင့်အရေးမျိုးပါ။ အဓိကက မိမိကလေးငယ်ကို မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဆီကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်အောင် သွန်သင်နိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထားရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကလေးရရင် သေချာတယ် မြန်မာပြည်ကို ပြန်မှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာပဲ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ဘ၀ကို အစွန်းအထင်းခံစေမယ်၊ အယူဝါဒကို သမာသမတ်ကျစေမယ်၊ မိမိနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးစေမယ်၊ မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲ၊ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ အမြင်မှာ မြန်မာဟာ မြန်မာပါ၊ အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံတိုင်းက မြန်မာကို ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မူတည်တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ မြင့်တက်လာအောင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သလို မြန်မာလူမျိုးနိမ့်ကျသွားအောင်လည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်တာပါ။
ချစ်သူနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ
မောင်ဘုန်း on6November 2011 at 18:51 said...
အင်း ... ဟုတ်ပါရဲ့ မြန်မာပြည် ကို ဖုန်းခေါ်ရတာလည်း ... ဝင်ရင်လည်း တစ်ခါ
မဝင်ရင်လည်း ... တစ်ရက် ဆိုလိုပဲနော် ....
အလို...သူများကလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပါကလား...စောပါသေးသကွယ်...တစ်ဆင့်ချင်းသွားရင် အဆင်မပြေပေဘူးလား...ရှေ့ဖြစ်တော့ မဟောတတ်ဘူး...နောက်ဖြစ်ကတော့ ဦးဟန်ကြည်တို့က ဘာကျွမ်းသလဲမမေးနဲ့...
နေတာက အရှေ့အိမ်ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ
စံပယ်ချို on7November 2011 at 03:02 said...
ညီရဲ on7November 2011 at 11:49 said...
ခေါ်ရင်တော့ လိုက်သာသွားလိုက် သူငယ်ချင်း...
ဘာမှ စဉ်းစားမနေနဲ့ ဟဲ..ဟဲ...
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! on7November 2011 at 20:03 said...
ငါဒီမှာ မင်းနဲ့နီးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်တဲ့ မမရေ...:):) အားမငယ်ပါနဲ့ မမရေ..ဒီလိုလေးပဲ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ အသက်ရှင်နေကြရတာဆိုတော့...အားမလျှော့ လိုက်ပါနဲ့...လို့..
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on 8 November 2011 at 01:52 said...
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) on 8 November 2011 at 08:00 said...
ကလေးနဲ့ ဖက်ပြီး စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်မဲ့ပုံဘဲ။း(
မဒမ်ကိုး on 8 November 2011 at 16:30 said...
ပစ်ပစ်လေးရေ .အမ ကိုရင့်ဆီရောက်နေလို့လိုင်းပေါ်မတက်နိုင်ခဲ့တာခွင့်လွှတ်ပါ
ဘာလို့လဲဆိုရင် ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာက ကံတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်
ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာသစ္စာရှိမှုကနေရလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှု့က အမအတွက်တော့ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ခဲ့ဘူး.
ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်နိုင်ကြပြီဆိုရင် နှစ်ဘက်မိဘတွေကိုလေးစား မျှတစွာတွေးပေး နားလည်မှု့ထားပေးပါ .နှစ်ကိုယ်တူကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်
ဒါဆို ပျော်ရွှင်နေလ်ိမ့်မယ် ..